March 17, 2018 - Apannpyay
“နှလုံးသားထဲမှငိုရှိုက်သံ” စိတ်ဓါတ်လေးတွေ ပြောင်းပေးဖို့ လူနာရှင်များ ကိုယ်စား မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။
“နှလုံးသားထဲမှငိုရှိုက်သံ” စိတ်ဓါတ်လေးတွေ ပြောင်းပေးဖို့ လူနာရှင်များ ကိုယ်စား မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများ ပိုမိုဖတ်စေချင်မိပါတယ် “နှလုံးသားထဲမှငိုရှိုက်သံ” လွိုင်ကော်ဆေးရုံကြီးမှ... Read More
နာမည်ကြီးနေတဲ့ မုဒြာခေါ်သံကို ဆုံးသွားတဲ့ သားဦးလေးအတွက် ရေးခဲ့တဲ့ သူမ
မုဒြာခေါ်သံကို ဆုံးသွားတဲ့ သားဦးလေးအတွက် ရေးခဲ့တဲ့ သူမ လက်တလောရုံတင်ပြသနေပြီး မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးကပရိသတ်တွေရဲ့ စိတ်ဝင်စားမှုအပြည့်ရရှိထားတာကတော့ မုဒြာခေါ်သံ ရုပ်ရှင်ကားပဲဖြစ်ပါတယ်... Read More
မယားငယ်နဲ့ အတူ ပြုနေချိန် ကွက်တိ မယားကြီးဘက်က ဆွေမျိုးများ ဝင်ရောက် အမိဖမ်း ရိုက်နှက် (ရုပ်သံ)
မယားငယ်နဲ့ အတူ ပြုနေချိန် မယားကြီးဘက်က ဆွေမျိုးများ ဝင်ရောက် အမိဖမ်း ရိုက်နှက် (ရုပ်သံ) အခြားအမျိုးသမီးတစ်ဦးနဲ့ဖောက်ပြန်နေခဲ့တဲ့... Read More
သားနဲ့ သမီးကလဲသဘောတူလို့မင်္ဂလာဆောင်တော့မယ်ဆိုတဲ့ ခင်ဇာခြည်ကျော် ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း သရုပ်ဆောင် ၀ါရင့်မင်းသမီး ခင်ဇာခြည်ကျော်တစ်ယောက် လက်ထပ်တော့မယ်ဆိုတဲ့... Read More
ဆေးရုံတင်ထားရပြီး ခွဲစိတ်ခန်းဝင်နေရတဲ့ ပရဟိတ မင်းသားကြီး ကိုဝေဠုကျော်
နန်းအပြုံးနဲ့ပြန်လာကာချော့မှ အငိုတိတ်နိုင်မယ်…ဆိုတဲ့😢 ကိုစိုင်းဆိုင်မောဝ်းရေ အခုလိုသတင်းကြားရတာ တော်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်ဗျာ
🎤🎵🎶🎼🎻စိုင်းရင်မှာ ငိုနေတယ် နန်းရယ်..နန်းလေးရဲ့အမုန်းတွေကြောင့်ဖြစ်မယ်..နန်းအပြုံးနဲ့ပြန်လာကာချော့မှ အငိုတိတ်နိုင်မယ်…ဆိုတဲ့😢 ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံး ရှမ်းအဆိုတော်ကြီး”စိုင်းဆိုင်မောဝ်း”ရဲ့ ကျန်းမာရေး သိပ်မကောင်းပါဘူးတဲ့ဗျာ…. တေးချစ်သူပရိတ်သတ်များအနေဖြင့်... Read More
The Voice Myanmar နည်းပြ ဒ်ုင်တွေ ဘာကြောင့် အဝတ်အစား မလဲတာလဲ … ?
ဒီမေးခွန်းက The Voice Myanmar အစီအစဉ်ကို အားပေးကြည့်ရှုကြတဲ့ ပရိသတ်တွေကြားထဲမှာ အရမ်းသိချင်နေကြတဲ့ မေးခွန်းလေးတစ်ခု ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။... Read More
အနုပညာကဏ္ဍ The Voice Myanmar